Famonoana vazaha tany Ste Marie : olona valo no efa nosamborina ary trano fito nosavaina (NewsMada) | AEMW
Famonoana vazaha tany Ste Marie : olona valo no efa nosamborina ary trano fito nosavaina (NewsMada)
Nitondra fanazavana momba ny vonoan’olona nitranga tany St Marie, ny tonia mampanoa lalàna, fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina Rajaonah Lauret Thierry, raha avy nitarika ireo mpitandro filaminana nanatanteraka ny fanadihadiana sy fisamborana momba ny raharaha famonoana an’ i Magalie sy Romain. Nambaran’ny tonia mpampanoa lalàna fa mikasika ny resaka mandeha fa havoaka sy halefa any Frantsa ilay teratany frantsay voarohirohy amin’ ity raharaha ity, fa azo atao tsara mihitsy izany fa kosa ny fitsarana eto Toamasina no misahana ny fanadihadiana ny raharaha, ary izy ihany koa no mitondra ny fanenjehana rehetra mikasika ny heloka be vava. Mitsara sy mamoaka didy ho an’ izay hitany fa meloka ka aorian’ny fivoahan’ny didy vao azon’ny firenena fiavian’ny teratany vahiny atao ny manao fangatahana amin’ny fitondram-panjakana hamindrany toerana ny olony ho any amin’ny fireneny manohy ny saziny.
“Afaka manokatra fanadihadiana ihany koa eo anivon’ny fampanoavana any Parisy sy any Nanterre”, hoy ny tonia mpampanoa lalana voalohany, Rajaonah Lauret Thierry. Nohamafisiny hatrany fa fiaraha-miasa eo amin’ny fitsarana malagasy sy frantsay no misy mikasika ity raharaha ity, fa tsy mitsabaka amin’ny fanadihadiana sy ny fanokafana antontan-taratasin’ady
ara-keloka ataon’ny fitsarana malagasy ny Frantsay.
Valo anaovana fanadihadiana
Hatreto, miisa valo izao ny efa voasambotra ary vehivavy ny roa. Fisamborana izay raisin’ny vahoaka ao Ste-Marie fa lasa tondro-molotra tahaka ny raharaha fakana an-keriny niseho farany tany Toamasina. »Mila mitady vokatra ny mpitandro filaminana ka lasa manao faobe fotsiny » hoy ny fitarainan’ny mponina any an-toerana.
Nambaran’ ireto fianakavian’ny olona voasambotra ireto fa mandeha ny resaka ao ankehitriny fa tafiditry ny politika ny raharaha ka misy mitady hirika hampandosirana an’ ilay teratany vahiny . Amin’ ireo enin-dahy kosa, nozaraina roa ka samy mihazona telo avy ny polisy sy ny zandary. Amin’ity farany no nohazonina ilay teratany frantsay tafiditra tamin’izao raharaha izao. Hatreto kosa, mahatratra fito ny trano tsy maintsy nosavaina. Vokatry ny haratsian’ny andro kosa, mbola sarotra ny fahatongavan’ ireo voarohirohy any Toamasina toerana hanaovana famotorana lalina.
@dmin August 29, 2016 NewsMada No Comments
← Litiges fonciers : Le changement textuel en est la source (Midi-Madagascar)
Tsy manaiky ny hampidirana am-ponja ny filohan’ny Hafari ny zokiolona (NewsMada) →